Tonian-dahatsoratra ao amin'ny Chief / Editor ao amin'ny Chief
Levent Özen - mifandray @rayhaber.com
Mpanonta / Redaktoren
Levent Elmastaş - mpamoaka lahatsoratra @rayhaber.com
Can Özen - afaka @rayhaber.com
Mpanolotsaina ara-bola / Mpanolotsaina ara-bola
Advertising / Dokam-barotra
Isan-taona, fiarandalamby haingam-pandeha sehatry, Torkia dia Nihalehibe ho tonga ny mpitarika tany Eoropa. Ny fampiasam-bola amin'ny lalamby, izay mitaky izany haingam-pandeha avy amin'ny fiarandalamby haingam-pandeha, dia mitombo hatrany. Ankoatra ny fampiasam-bola natao tao an-tanàna, maro amin'ireo orinasam-pambolena ao aminay no mamiratra. Mahafaly ny manomboka ny famokarana fiarandalamby tiorka haingam-piaramanidina ın ary koa fiara an-dalamby an-dalamby, lamasinina ary mpanamboatra fiara an-dalamby ambanin'ny tany. Faly be izahay eto amin'ity latabatra miavonavona ity.
Efa niasa nandritra ny taona maro izahay 7 amin'ny maha-mpanao fanavaozana sy tsy manavakavaka azy ireo. RayHaber Nanjary vavahadim-baovao lehibe iray ny tranonkalantsika izay misy mpitsidika tsy manam-paharoa 50 an'arivony isan'andro miaraka amin'ny vaovao 20 arivo, bulletins atao lavanty isan'andro ary ny arsiva isan-taona amin'ny 30. Ny tanjona dia ny hifindra ny 100 arivo mpitsidika isan'andro, toerana fandaharana ao amin'ny firenena Torkia hiditra ao mitaingina toerana voalohany.
Lalan'ny Railway any Torkia Ny haavo dia avo. Orinasa mpamokatra orinasa. Fanampiana amin'ny fiara eo an-toerana, LRT ary fiarandalamby ambanin'ny tany, izay antsoina hoe "fiaran-dalamby nasionaly". Faly koa izahay ny ho mendri-kaja eo amin'ny toe-javatra ity.
Miasa ho an'ny vaovao momba ny varotra vaovao sy mangarahara mandritra ny taona 7 izahay. RayHaber pejy web manana vaovao mihoatra ny 50.000, bulletins tender isan'andro sy ny 20 fiaran-dalamby hahatratra vavahady goavambe miaraka amin'ireo mpitsidika tsy manam-paharoa 30.000 isan'andro. Ny tanjonay vaovao dia mpitsidika 100.000 isan'andro ary ho any amin'ny tranokala 1000 ao anaty lisitry ny tranonkala iraisam-pirenena.
Release name: RayHaber
haino aman-jery: tranonkala / pirinty
Créé: 01.12.2011 test / Live 01.01.2011
News: Vaovao 60.000, lahatsary 1700
mpitsidika: 30.000 tokana / andro
RayHaber.com dia nampanantena fa hanaraka ny Fitsipiky ny Professional Professional sy ny zo rehetra voatokana.
Navoakanay ny pejinay vaovao araka ny lalàna No. 5846 momba ny asa-tsaina sy artista. Ny famoahana sy famoahana ny vaovao voarain'ireo masoivoho amin'ny sehatra rehetra dia mitaky fahazoan-dàlana an-tsoratra mialoha mifanaraka amin'ny politika ataon'ny sampan-draharaha mifandraika amin'izany. RayHaberlahatsoratra sy lahatsoratra hafa navoaka tao amin'ny RayHaberazo haverina avoaka raha toa ka nomena rohy ny pejy mifandraika amin'ny .com. RayHaberNy mpanoratra dia tompon'andraikitra amin'ny lahatsoratra sy ny fanehoan-kevitra navoaka tao amin'ny .com.
Ny politikantsika vaovao
Tsy miandany ny tranokalantsika ary tsy misy mampahafantatra ireo mpamaky azy fotsiny ny zava-nitranga sy ny zava-nitranga tamin'ny vaovao avoakany sy mbola hamoaka. Mikendry ny hanazava sy hanolotra izany amin'ireo mpamaky azy io raha tsy misy zava-mitranga. RayHaberNy votoatiny namoaka .com 100% dia navoaka araka ny lalàn 'ny Repoblikan'i Torkia, dia namoaka sary isan-karazany, vaovao, sy ny vaovao avy amin'ny zon'ny mpamorona tompony ny tsara soratra no navoakan'ny mahazo alalana an-tsoratra.
RayHaberNoraisiny ny fanajana ny lalàna, ny lalàna, ny zon'ny mpamorona ary ny zon'ny tsirairay manokana. Ny tranonkalanay dia lasa 'mpamatsy votoaty' araka ny voafaritry ny lalàna 5651. Raha ny lalàna mifandraika dia tsy voatery mifehy votoaty tsy ara-dalàna ny fitantanana ny tranokala. Noho izany, ny tranokalanay dia nampihatra ny foto-kevitra 'fampitandremana sy esory. Ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona izay misalasala momba ny fahamarinan'ny vaovao ary mahatsapa fa zahana tsy ara-dalàna ny asan'ny zon'ny mpamorona ary ny zon'ny lalàna dia voahitsakitsaka ny vaovao rehetra, ny info @Rayhaber.com mailaka adiresy na TOHANAO HANOMPOANA. Ny mpisolovavanao dia hamerina hijery ny fitarainanao sy ny fangatahana ary ny votoatiny izay heverina ho fanitsakitsahana dia hesorina amin'ny tranokalanay avy hatrany.
© Copyright 2018 RayHaber.com All rights reserved. Ny zon'ny karazan'entana rehetra toy ny kaody, vaovao, sary, dinidinika RayHaber.com an'i. RayHaberNy lahatsoratra, ny fitaovana, ny sary, ny rakitsary, ny sary, ny horonan-tsary, ny endrika ary ny fandaharana amin'ny vohikala .com dia arovan'ny lalàna 5846. ireo RayHaber.com mety tsy adika, zaraina, ovaina, navoaka amin'ny fomba rehetra tsy misy alalana an-tsoratra momba ny .com. Ny fandikana sy fampiasana dia tsy azo atao raha tsy misy alalana ary tsy mamaritra ny loharano.
RayHaberNy rohy ivelany dia misokatra amin'ny pejy misaraka. Ny mpanoratra dia tompon'andraikitra amin'ny lahatsoratra sy fanehoan-kevitra navoaka. RayHaber.com dia mety miova amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampilazana. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahadisoana nateraky ny fampahalalana an'ity tranonkala ity izahay.
Izahay dia hitazay ho tsiambaratelo ny fampahalalana anao. Amin'ny ankapobeny, dia hampiasa ny fampahalalana anao ao anatin'ny RayHaberI ampitahao. Na izany aza, indraindray RayHaber.com dia mampiasa ny antoko fahatelo mba hametrahana ny fampahalalana anao. RayHaber.com dia mitaky ireo ankolafy telo ireo mba hanaraka tanteraka ny torolalana ary RayHaber.com dia mitaky ny tsy hampiasany ny mombamomba anao raha tsy manana tanjony manokana izy ireo. Rehefa mifandray ianao RayHaber.com dia mahazo fampahalalana momba anao manokana izahay indraindray. Ohatra, raha manoratra aminay ianao na misoratra anarana amin'ny gazety iray, azonao atao ny milaza aminay hoe iza ianao, ahoana ny fomba hifandraisanao aminao sy ny hevitrao. Rehefa mampiasa RayHaberserivisy ao amin'ny .com. Izahay dia mampiasa cookies ary manangona adiresy IP. Afaka mahita bebe kokoa momba izany ianao ao amin'ny RayHaber.com cookies momba ny politika momba ny tsiambaratelo feno.
Ny rohy ivelany rehetra ao amin'ilay tranokala dia misokatra amin'ny pejy misaraka. RayHaber.com dia tsy mandray andraikitra amin'ny rohy ivelany.